'डल्बी एट्मोस्'मा शिव परियारको 'नभेटी नभेटी', के हो यो प्रविधि ?
गायक शिव परियारको 'नभेटी नभेटी' बोलको गीत 'डल्बी एट्मोस्' प्रविधिको प्रयोग गरी ध्वनि समायोजन गरिएको छ ।
'डल्बी एट्मोस्' प्रविधि प्रयोग गरी ध्वनि समायोजन गरिएको यो पहिलो नेपाली गीत हो । यसको प्रयोग गर्ने व्यक्ति मुम्बई निवासी नेपाली साउण्ड इन्जिनियर समिक सापकोटा हुन् ।
'नेपाली संगीतको जगतमा यो नौलो तकनिकी अनुप्रयोगयुक्त ध्वनि मिश्रण गरिएको हो,' सापकोटाले भने ।
भारतमा भने 'नाइन्टीनाइन संग्स्' नामक चलचित्रका गीतहरूमा यस प्रविधिको पहिलो प्रयोग प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमानले गरेका थिए ।
आखिर यो 'डल्बी एट्मोस्' प्रविधि के हो त ?
समिक भन्छन्, 'साधारणतया गीत वा सांगीतिक रेकडिङ्हरू स्टिरियो वा मोनो फर्म्याटमा रेकर्डिङ् एवं मिश्रण गरिएका हुन्छन् तर डल्बी एट्मोस् प्रणालीअन्तर्गत मिश्रण गरिएका गीतहरू भने स्थानिक ध्वनि प्रविधिलाई अपनाएर मानिसले वास्तविक जीवनमा झैं चारै दिशा एवं ओभरहेड र सतही दिशाहरूबाट प्रसारित हुन्छन् ।
'डल्बी एट्मोस्' प्रविधिको उपयोग गरिएका सांगीतिक प्रस्तुति सुन्दा वास्तविक जीवनमा जस्तै प्राकृतिक ध्वनिको अनुकरण एवं आभास हुने उनको भनाइ छ ।
'प्रायोगिक रुपमा यो अझै पनि एक नवीन फर्म्याट र प्रविधि भएकाले जनमानसमा सबैलाई विदित नहुन सक्छ,' उनले भने ।
अहिलेका लागि 'डल्बी एट्मोस्' इंकित गीतसंगीत सुन्न चाहने स्रोताले टाइडल, एप्पल म्युजिक र अमेजन एच डी जस्ता स्ट्रिमिङ प्ल्याटफर्महरूबाट लाभ उठाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
'यो फर्म्याट नेपालमा एप्पल म्युजिकमार्फत् प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि आधारभूत रुपमा अनुकूल सुन्ने साधन भने जरुरी हुन्छन्,' समिक भन्छन्, 'मोबाइलमा भने बिनओरल फर्म्याटमा बज्ने गर्छ र त्यसका लागि उचित हेडफोन वा इअरफोनको आवश्यकता हुन्छ । यस प्रविधिको उपयोग गर्दा वास्तविक संगीत कार्यक्रममा सुनैझैँ आभास हुन्छ ।'
मनोज गजुरेलले गरे बिहे
कसरी काट्दैछन् आर्यन खानले जेलमा दिनहरू ?
शिव परियारको ‘पिउन शुरू गरेपछि’
शाहरुखका छोरा आर्यनले भने- जेलबाट छुटेपछि गरीबहर...
लुम्बिनी : बाढी प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन माग
बाढीपहिरो अपडेट : मृत्यु हुनेको संख्या ४८ पुग्यो, ३१ बेपत्ता